ဘယ်သူ ဘူးကြီးလည်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Critic » ဘယ်သူ ဘူးကြီးလည်း
Posted by pazflor on Sep 1, 2012 in Critic, Society & Lifestyle | 19 comments
ခေါင်းစဉ်ကြည့်ပြီးတော့ ဘာဘူးလည်းလို့မတွေးကြပါနဲ့ ဦးခင်ဗျ။ ဘာဘူးလည်းဆိုတာ ဆက်ဖတ်ရင်းသိသွားမှာပါ။
ရှေ့ အပတ်တုန်းက အဆောင်က သူငယ်ချင်းသုံးယောက်နဲ့ ဘာလင်ကို သွားလည်ဖြစ်ပါတယ်။
ရုတ်တရက်ကြီး အစီအစဉ်မရှိဘဲ သွားတာဆိုတော့ သူတို့ညွန်းတဲ့အဆောင်မှာဘဲ အင်တာနက်က ဘွန်ကင်လုပ်လိုက်ပါတယ်။ ၆ယောက်ခန်းအရောခန်းမှာပါ။ သေချာမမေးမိတော့ မသိဘူး၊ သူငယ်ချင်းသုံးယောက်က နောက်မှ ၈ ယောက်ခန်းမှာ ဘွတ်ကင်တင်ထားမှန်းသိတော့တယ်။
နောက်နေ့ မနက်ဘာလင်ရောက်တော့ အဆောင်အရင်သွားပြီး confirm လုပ်၊ အထုပ်အလေးတွေ အပ်ခဲ့ပြီး ဒိုးကြတာပေါ့ဗျာ။ အဆောင်ပြန်ရောက်တေ့ ည ၉ နာရီကျော်နေပြီ။ အဲ့ အချိန်ကြတော့ ကျန်သုံယောက်နဲ့ ကျနော်နဲ့ အခန်းမတူမှန်းသိတော့တယ်။
ကိုယ်အခန်းထဲရောက်တော့ ဘယ်သူမှ မတွေ့။ အထုပ်တွေတော့ နေရာယူထားကြပြီ။ နောက်ဆုံး ကျန်တဲ့ ကုတင်မှာ ကိုယ် name tag လည်းထည့်၊ ဘုံခန်းမှာ ရေသွာချိုးပါတယ်။ ပြီးတော့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ Alexanderplatz မှာ ညစားစား၊ စကားလည်းဘာလေးပြော။
အဆောင်ပြန်ရောက်တော့ ၁၁ ခွဲပြီးနေပြီ။ အခန်းထဲမှာလည်း တခါမှ မမြင်ဘူးတဲ့ အခန်းဖော်၎ ယောက် ရောက် နှင့်နေကြပါပြီ။ ယောကျာ်းလေးလေးယောက်နဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ပါ။ အထီး ၃ ကောင်က အော်ဇီသား၊ အဖြူမက နောက်မှ ပြင်သစ်သူမှန်းသိပါတော့တယ်။ ဟိုသုံးကောင်က ပြင်သစ်မကို ၀ိုင်းမေးလိုက်ပြောလိုက်ပေါ့။ ပထမတော့ တစ်အုပ်စုတည်းလို့ထင်တာ နောက်မှသူတို့ပြောစကားတွေ နားထောင်ကြည့်ပြီး သပ်သပ်စီမှန်းသိပါတော့တယ်။
ကျနော်ကလည်း အိပ်ရာပြောင်းရင် ဘယ်လိုမှ အိပ်မပျော်တတ်တဲ့ကောင်ဆိုတေ့ာ ဘယ်လိုမှ အိပ်မပျော်မယ်မှန်းမှန်းထားပြီးသားပါ။ နောက်နာရီဝက်လောက်ကြာတော့ နောက်တစ်ကောင်ထပ်ရောက်လာပြီး ကလပ်သွားကြမယ်ဆိုပြီးထွက်သွားကြပါတယ်။ အခန်းထဲမှာ ကျနော်နဲ့ ပြင်သစ်မလေး နှစ်ယောက်တည်း။
မျက်စိမှိတ်ထားပေမဲ့ ကျနော်အိပ်မပျော်သေးပါဘူး။ မှေးခနဲဖြစ်သွားပြီး ၂နာရီလောက်မှာ အခြားနှစ်ကောင်ပြန်လာကြပါတယ်။ နောက်ပိုင်းတော့ အိပ်မပျော်တပျော်နဲ့ မနက် ၇နာရီ ၂၀ လောက်မှာ နိုးလာပါတယ်။ သိပ်မကြာဘူး ၇နာရီခွဲလောက်မှာ အခန်းတံခါးဖွင့်သံကြားတာနဲ့ အကုန်လုံးနိုးလာကြပါတယ်။
အခန်းထဲမှာ တစ်ယောက်တည်းကျန်ခဲ့တဲ့ ကောင်မလေးရဲ့  ဘော်ဘော် နောက်ပြင်သစ်မ ၂ယောက်ပါ။ ကလပ်မှာ ညလုံးကျွတ်သောင်းကျန်းနေပြီး မနက်ရောက်မှ ပြန်ရောက်လာတာပါ။ ကျနော်လည်း ဆက်အိပ်လို့မရတာနဲ့ အထုပ်သိမ်းပြီး ရေချိုးအ၀တ်အစားလဲပြီး သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ချိန်းထားတဲ့ အတိုင်း စားသောက်ခန်းမှ မနက်စာစားပြီး စောင့်နေပါတယ်။
မနေ့ညက ကျနော်နဲ့ ပြင်သစ်မလေး အခန်းထဲမှာ နှစ်ယောက်တည်း။ ကျနော်အတွက်တော့ နည်းနည်းဆန်းနေသလို။ ဟိုမှာတော့ ပုံမှန်ပါဘဲ။
ကျနော်တွေးမိတယ်…ကျနော်တို့ဆီမှာဆို ဒီလိုကိစ္စမျိုးမှာ အကဲဆတ်မယ်ထင်တယ်။
ဟိုတလောက ဂဇတ်ထဲမှာ ရန်ကုန်ဘတ်စကားပေါ်မှာ အတွဲတွေ သောင်းကျန်းတာနဲ့ ပက်သက်ပြီး ရေးတာတွေ့မိတယ်။ ကျနော့်ထင်မြင်ချက်တော့ မပေးတော့ပါဘူး။
မြန်မာပြည်မှာဆို ယောကျာ်းလေး၊မိန်းကလေး ခွဲခြားထားတာမျိုးတွေ အများကြီးပါ။ ဆိုပါစို့ ယောကျာင်္းလေးနဲ့ မိန်းကလေးအများမျက်ကွယ်မှာ နှစ်ယောက်တည်းမနေသင့်တာမျိုး။ ဗီဒီယိုကားတွေထဲဆို ကောင်လေးနဲ့ ကောင်မလေး နှစ်ယောက်တည်း အခန်းတည်းမှာ ပိတ်မိသွားလို့ နောက်ကျ ပေးစားလိုက်တာမျိုးတွေဘာတွေရှိတာကိုး။ ဒါနဲ့စပ်လို့ပြောရဦးမယ်ဗျ။
ကျနော်တို့ ဆယ်တန်းတုန်းက ကျူရှင်ဆရာတစ်ယောက်က လူပျိုကြီး (အဲ့တုန်းကပေါ့)။ ဆရာက ရုပ်ဖြောင့်၊ ပိုက်ဆံလည်းအတန်အသင့်ချမ်းသာပါတယ်။ အနေတော့အေးပါတယ်။ နောက်နှစ်လောက်ကြာတော့ ဆရာမိန်းမယူသွားပြီဖြစ်ကြောင်း ကျနော်နဲ့ အရမ်းရင်းနှီးတဲ့ ဆရာမတစ်ယောက်စီကနေကြားပါတယ်။ နောက်ထပ်ကြားရတာကတော့ ဆရာ့ခင်ဗျာ မြန်မာပြည်မှာ ပြောလေ့ရှိတဲ့ အမိဖမ်းခံရတဲ့ ပုံစံမျိုးဖြစ်တာပါတဲ့ဗျာ။ ကျုရှင်သင်တဲ့ ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ အမနဲ့ အိမ်နီးချင်း သူငယ်ချင်းနဲ့တဲ့။ အဲ့ အမသူငယ်ချင်းက ဆရာကိုသဘောကျနေတဲ့ပုံပေါ့ဗျာ။ ဆရာစာသင်ချိန်ဆိုလာတယ်။ ကော်ဖီတို့ မုန်တို့ချပေးတတ်တယ်ပေါ့။ နောက်တော့ အခန်းထဲမှာ ကလေးတွေ စာသင်ချိန်မလာသေးခင် အတူရှိတယ်ဆိုပြီး ရပ်ကွက်နဲ့ ဖမ်းလိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ယူလိုက်ရတယ်ပေါ့။
တလောက မနိုဗွီရဲ့  ပိုစ်ထဲမှာလည်း ဆရာဝန်တွေအိမ်ခေါ်ရ ခက်တဲ့ အကြာင်းရေးထားတာဖတ်မိပါတယ်။ အဲ့ထဲမှာ အမိဖမ်းခံရမှာ ကြောက်တာလည်းပါတယ်လို့ထင်ပါတယ်။
ကျနော်တို့ မြန်မာပြည်မှာ မိန်းကလေး၊ယောကျာင်္းလေးကွဲပြားမူ့က သိသာပါတယ်။ တက္ကသိုလ်တွေမှာ အဆောင်နေကြတုန်းကဆို မိန်းကလေးဆောင်၊ ယောကျာင်္းလေးဆောင်သပ်သပ်ရှိပါတယ်။ ဘာလို့ ပေါင်းမထားနိုင်ကြတာလည်းဗျာ။ ရန်ကုန်မှာလည်း အဆောင်ဌားနေကြသူတွေဆို လည်း မိန်းကလေးဆောင်၊ ယောကျာင်္းလေးဆောင်သပ်သပ်ရှိတာများပါတယ်။
ညဘက်ထွက်ရင်လည်း မိန်းကလေးတစ်ယောက်တည်းဆို မသင့်တော်တာ၊ အန္တရာယ်ရှိတာမျိုးတွေရှိတတ်ပါတယ်။ ဗီဒီယိုထဲဆို ညဘက်တစ်ယောက်တည်းထွက်တဲ့ ကောင်မလေးတွေကိုလိုက်နှောက် ယှက်တာမျိုးခဏခဏပါတတ်ပါတယ်။ တခါတလေ တက်စစီ ဌားစီးရင်တောင် မိန်းကလေးတစ်ယောက်တည်းဆို ကားသမားက ထိကပါးရိကပါးလုပ်တတ်တာမျိုးတွေလည်းကြားရပါတယ်။
ဒီတော့ စဉ်းစားမိပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ မိန်းကလေးဖြစ်ရတာ မလုံခြုံသလိုပါဘဲ။ ဒီတော့ ကျနော်တို့ မြန်မာ ယောကျာင်္းလေးတွေ ပိုဘူးကြီးလို့လားပေါ့နော်။။။။။
အဲအဲ မြန်မာကြီးဖြစ်တဲ့ ကို pazflor ကော နှစ်ယောက်ထဲမှာ ဘူးလိုက်လားဟင် ..
” တက္ကသိုလ်တွေမှာ မိန်းကလေးဆောင်၊ ယောကျာင်္းလေးဆောင်သပ်သပ်ရှိပါတယ်။
ဘာလို့ ပေါင်းမထားနိုင်ကြတာလည်းဗျာ ”
ဒါနှင့် သူကြီးရေ ၊
နိုင်ငံခြား အဆောင်တွေမှာ မိန်းကလေး ၊ ယောက်ျားလေး တွဲထားတာ သိပါတယ် ။
အဲဒါ အခန်း တစ်ခန်းထဲမှာကော မိန်းကလေး ၊ ယောက်ျားလေး တွဲထားလား မသိ ။
အတွဲတွေကတော့ အခန်းထဲတူတူနေကြတာများပါတယ်။ အခန်းတစ်ခန်းထဲတော့ မသိသူ နှစ်ယောက်ကိုတွဲထားတာ မတွေ့ဘူးပါဘူး အဘရေ။
” ဒီတော့ ကျနော်တို့ မြန်မာ ယောကျာင်္းလေးတွေ ပိုဘူးကြီးလို့လားပေါ့နော် ”
အဘ စာအုပ်တွေထဲမှာ ဖတ်ဘူးတာက ၊
အဘတို့ အပူပိုင်းဒေသကလူတွေက အဲဒီစိတ် ပိုပြင်းပါတယ် ။
ရာသီဥတုပူလို့ပါ ၊ စိတ် ထကြွလွယ်ပါတယ် ။
အေးနေရင် တော်ရုံနှင့် အဲဒီစိတ် မထကြွပါဘူး ။
အဲဒါကြောင့် အအေးပိုင်းဒေသက အမျိုးသမီးတွေ အလုပ် ပိုရှုပ်ပါတယ် ။
အိပ်ယာပြောင်းလို့ အိပ်မရတာက နဲနဲ
အကုန်ကို မှတ်မိနေတာ ဆိုကတည်းက
ဟင်း … ဟင်း
သြော်… နိုင်ငံခြား.. နိုင်ငံခြား…
ယဉ်ကျေးမှု အတွေးအခေါ်ခြင်း သိပ်ကွာတယ်လေ…။ တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှုခြင်းလည်း ကွာတယ်။ တချက်ထဲကြည့်ပြောလို့ မရဘူး..။ လိင်ကိစ္စပွင့်လင်းမှု စံကို မူတည်ပြီး ကြည့်မှရမယ်။ အမှန်အမှား ပြောဖို့ခက်တယ်။ ကောင်းတာရှိသလို ဆိုးတာလည်း ရှိတယ်။ တခုရှိတာ ရုပ်ဝတ္ထုတိုးတက်လာ ကြီးပွားချမ်းသာလာရင် အနောက်ပုံစံ လိင်ကိစ္စခံစားမှု ပွင့်လင်းလာမှာပဲ။ သူတို့လို မဖြစ်သေးဘဲနဲ့တော့ ဝမရှိ ဝိမလုပ်တာကောင်းတယ်။ ဖြစ်လာမှာပါ မပူနဲ့..ကြီးပွားချမ်းသာအောင်သာ ကြိုးစား၊ နည်းမှန်လမ်းမှန်နဲ့ အလုပ်များများလုပ်၊ ဥပဒေစိုးမိုး ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိတဲ့ လူဘောင်ဖြစ်အောင် ဝိုင်းတွန်းအားပေးပါ..။ နောင်ဆို သာသနာတောင်ကွယ်ရမှာ..အခုပြောနေတဲ့ ထိန်းချုပ်မှုဆိုတာ ဘာသာနဲ့ ထုထားတာမှတ်လို့။
လိင်စိတ် ထိန်းချုပ်မှု အားကောင်းအောင် ၊ လိင်ဆက်ဆံရေးပညာပေးတာရယ် ၊ လုပ်သင့်မလုပ်သင့် အဆိုးအကောင်းခွဲခြားနိုင်ဖို့ အသိတရား ရယ်ကို ကျောင်းတွေမှာသင်ကြားပေးသင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်
ိမိဘတွေ အနေနဲ့ လဲ ကိုယ့်သားဖြစ်ဖြစ် ၊ သမီးဖြစ်ဖြစ် ကို ငယ်ကတဲက သင်ပေးသင့်ပါတယ်
The Girl Next Door က ဒါရိုက်တာ က ကိုပေ လားဟင် ! ဟဲဟဲ !
အနောက်နိုင်ငံများမှာ လိင်ကိစ္စဆိုတာ အရမ်းအရမ်းကို ရိုးသွားလို့ပါ။
အဲဒါကြောင့် တော်ရုံနဲ့လဲ ရင်လဲမခုန်၊ ဘာမှလဲ မဖြစ်တော့ပုံရပါတယ်။
ဒါပေသိ အဲဒိအနောက်နိုင်ငံများမှာပဲ ၁၈-၁၉ ရာစုတုန်းကတော့ ကျားနဲ့မ တွေ့ရင်ဖြစ်ဖြစ် (အခန်းထဲလို)ဆိတ်ကွယ်ရာမှာ နှစ်ယောက်ထဲရှိရင်ဖြစ်ဖြစ် ဖိန်းတိန်းရှိန်းတိန်း ဖြစ်တယ် ဆိုတာကိုတော့ အဂ်လိပ်ဝထ္ထုအဟောင်းတွေဖတ်ပြီး သိရပါတယ်။
ဆိုတော့… ခေတ်က စကားပြောသွားတာလို့ထင်ပါကြောင်း…။
ကျုပ်နဲ့ရင်းနှီးသူတဦးဟာ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်က အင်္ဂလန်မှာ ပညာသင်ပါတယ်။ ကျောင်းကထားတဲ့ ဘော်ဒါဆောင်လိုမျိုးမှာ မိန်းကလေးအခန်းသပ်သပ် ယောက်ျားလေးအခန်းသပ်သပ် ရောထားပါတယ်။ ဘာပြဿနာမှမဖြစ်ပါဘူး။ အားလုံးစာသင် စာကြည့် မပျက်ပါဘူး..။
လိင်ဆက်ဆံတာကိုတော့ ထမင်းစားရေသောက်လို မကြာခဏလုပ်ဖြစ်ကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ပြဿနာလို့ထင်မှ ပြဿနာရှိတာပါ။ ပြဿနာလို့မထင်တဲ့ခေတ်ရောက်ရင် ဘာမှပြဿနာမဟုတ်ပါဘူး..။
လူဆိုတာလဲ အဲဒီခေတ်မျိုးကနေ တရွေ့ရွေ့တိုးတက်(အီဗော်လူးရှင်း)လာတာပါနော….။
မြန်မာပြည်မှာတော့ ရောထားလို့ မရသေးဘူးထင်နော် ဦးပါ။
သမီးရှင်မိဘ၂ပါး ခင်ဗျာ ၊ မျက်ရည်ဆူနာမီ ဖြစ်သွားမယ်
၇-၈နှစ်အရွယ် ကလေးမလေး ကို မုဒိန်းကျင့်သွားတာတဲ့ဗျို့ 
အဲဒီသတင်းလဲဖတ်ရရော ၊ ကျုပ်မိတ်ဆွေတွေအားလုံး သူရို့ သမီးပေါက်စနတွေကိုပါ အထူးကြပ်မတ် ထိန်းသိမ်းနေကြတယ်ဗျ
ကျနော်တို့ ယောကျာင်္းလေးတွေက လစ်ရင်လစ်သလို လုပ်ချင်ကြတယ်လေ။
ညဘက်မိုးချုပ်ထွက်တိုင်း မိန်းမကောင်း၊မိန်းမပျက် မခွဲခြား ထိကပါးရိကပါးလုပ်ချင်သူတွေလည်းပေါပ။
အဓိက ကတော့ ဦးကြောင်ပြောသလို တရားဥပဒေစိုးမိုးဖို့…
နောက်အချင်းချင်း ကိုယ်ချင်းစာ၊လေးစားတတ်တဲ့ စိတ်ကလေးရှိဖို့လိုတယ်ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
နည်းလမ်းမှန်တဲ့SexEducationတနိုင်ငံလုံးစာစဉ်းစားပီးလုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်။ အခုတလောအပြောများနေတဲ့ ထရန်စပေရန်စီပေါ့ဗျာ။ သိဘီးသားကိတ်စတွေကို ထုတ်ပြောရမှာရှက်တဲ့ လူကြီးတွေဆီကဘာမှမရနိုင်တော့ ပညာပေးအစီအစဉ်သီးသန့်လုပ်ပေးနိုင်မှလူငယ်တွေသိသင့်တာ သိချင်တာသိခွင့်ရမှာပေါ့။ အထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးတွေ(ကြီးကြီး၊ ငယ်ငယ်) ပိုသိသင့်တယ်လို့မြင်တယ်။ မသိလို့ခံလိုက်ရတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေဒီနိုင်ငံမှာပိုများသလားလို့။
ဟုတ်ကဲ့ အခု ကိစ္စမှာ ကျနော် အဓိက ပြောချင်တာ လစ်ရင်လစ်သလို မြန်မာ မိန်းကလေးတွေ အပေါ်အနိုင်ကျင့်တတ်တဲ့ ယောကျာင်္းလေးတွေ အကြောင်းပါ.
အမပြောသလို education လေးပေးရပါမယ်ခင်ဗျာ။
( အခန်းထဲမှာ ကျနော်နဲ့ ပြင်သစ်မလေး နှစ်ယောက်တည်း။ မျက်စိမှိတ်ထားပေမဲ့ ကျနော်အိပ်မပျော်သေးပါဘူး။ )
Pazflor ရေ လစ်ရင် လစ်သလို ဆိုရင် မလစ်ရင် မလစ်သလိုလားသိချင်လို့။
ကျွန်တော်တော့ ခိုင်ထူး သီချင်းလေးကိုဘဲ ဆိုလိုက်မိပြီဗျာ။
xxx ပေးချင်ပေမယ့်လည်း xx ယူသူရှိမှပေးဖြစ်မှာပါ xxxx ရချင်ပေမယ့်လည်း xxxx သူဝေဌမှ ဖြစ်မှာပါ xxxxxx
ကျနော်လဲ မကွေးဖက်က အဝေးသင်အဆောင်တွေမှာ ရေနြှောထားကြတာ ကြုံဖူးပါတယ်။